Primo အခမဲ့ Download | APK ကို Android အတွက် Download
ပင်မစာမျက်နှာ » လူမှု Apps ကပ » Primo
Primo APK ကို
Primo သင်သည်အခမဲ့ကမ္ဘာတဝှမ်းမခေါ်နဲ့မက်ဆေ့ခ်ျကိုမိသားစုနှင့်မိတ်ဆွေများမှခွင့်ပြုမယ့်အခမဲ့ဆက်သွယ်ရေး App ဖြစ်ပါတယ် *
* အခမဲ့ 60 ကျော်နေရာများအတွက်ကုန်းမြေနယ်နိမိတ် Call, ဒါမှမဟုတ် 200 နေရာများကျော်ရောက်ရန်မိနစ်နှုန်းထားများနှုန်းအနိမ့်ဝယ်ယူရန်။
ယနေ့သင့်ရဲ့ဖုန်းသို့မဟုတ် Tablet ကိုအပေါ် Primo Download နှင့် 3G, 4G သို့မဟုတ် Wi-Fi ကိုသုံးပြီးမိတ်ဆွေတွေ, မိသားစုနှင့်အတူမျှဝေတောင်းဆို, ဗီဒီယို chatting, messaging နှင့် file ကိုစတင်ပါ။
အခမဲ့ 60 နေရာများကျော်အခမဲ့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာခေါ်ဆိုမှုခေါ်ဆို * သင့်ရဲ့အခမဲ့ Primo မိနစ်ကိုသုံးနိုင်သည်။ ကျနော်တို့ကဤမိနစ်ကုန်ဆုံးဘယ်တော့မှဒါကြောင့်သူတို့ကိုသင်လိုအပ်သည့်အခါသူတို့ရှိပါသည်။
ကျော် Primo ရဲ့အနိမ့်နှုန်းတစ်မိနစ်နှုန်းထားနှင့်အတူ 200 နေရာများနှင့်နှုန်းကိုအစီအစဉ်များကိုရန်သင့်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာခေါ်ဆိုမှုမည်သူမဆို, ANYWHERE- ကြော်ငြာကို Save လုပ်ရန်ခေါ်ဆိုပါ။ နှုန်းထားများတစ်မိနစ်လျှင် 1 ရာခိုင်နှုန်းသကဲ့သို့နည်းနည်းမှာစတင်ပါ။
ခေါ်ဆိုမှုများ PRIMO နှင့်စကားပြောရန် Unlimited & အခမဲ့ PRIMO - အားလုံး Primo app ကိုဖုန်းခေါ်ဆိုမှုနဲ့ messaging Primo အခမဲ့ဖြစ်ကြသည်။ * app ကို Download လုပ်ပါ, သင့်သူငယ်ချင်းများကိုဖိတ်ခေါ်ရန်နှင့်အခမဲ့ဖြစ်သည်ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုနဲ့ messaging နှင့်အတူချိတ်ဆက်ပျော်မွေ့။
အကျိုးခံစားခွင့်ရယူပါ - Primo ရန်သင့်မိတ်ဆွေများနှင့်မိသားစုကိုရည်ညွှန်းကိုးကား, သူတို့ကို download လုပ်သည့်အခါနှင့်သင်သက်တမ်းမကုန်ဆုံးနိုင်အခမဲ့လွှဲပြောင်းမိနစ်နှင့်အတူဆုခခြဲ့ပါလိမ့်မယ် join ။ ငါတို့သည်လည်းပဲကိုယ့်ကိုယ်အကြောင်းကျွန်တော်တို့ကိုပြောပြဘို့သင့်ကိုမိနစ်တဦးတည်းကိုချွတ်ပေးလိမျ့မညျ!
စာသားမက်ဆေ့ခ်ျ - နေပါစေသူတို့တွေဘာတွေရှိတယ်ဆိုတာတိုင်းပြည်ရုပ်ပြောင်ပါဝင်သည်, သင်တန်း - ။ ကမ္ဘာတဝှမ်းချစ်ရသူထံမှ (စွဲချက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်) ကစာသားမက်ဆေ့ခ်ျပို့ပါ, လက်ခံ!
ဘာမှမျှဝေ - Primo အတူသင်ချက်ချင်းသည်အခြား Primo အသုံးပြုသူများနှင့်ရုပ်ပုံများ, ဂီတ, ဗွီဒီယိုများနှင့်ပိုပြီးမျှဝေနိုင်ပါသည်။
ဘယ်နေရာမှာမဆို, ယနေ့ Primo ကြိုးစားပါနှင့်မည်သူမဆိုချိတ်ဆက်နေဖို့။
Facebook မှာ - https://www.facebook.com/primoconnectinc
တွစ်တာ - https://twitter.com/primoconnect
ဒေါင်းလုပ်ဆွဲနှင့်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းသင့်မိသားစု, သူငယ်ချင်းများနှင့်အတူချိတ်ဆက်ဖို့ Primo သုံးပြီးအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
•ဗီဒီယိုခေါ်ဆိုမှုယာယီနောက်ထပ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ဖယ်ရှားခဲ့ပြီး - ပြန်လည်လွှတ်ပေးရန်ညှိနေ
သငျသညျကိုခံစားရန်အဘို့အ app ကိုဖြတ်ပြီး Plus အားဘာဂ်နှင့်တိုးတက်မှုများ။
ကျနော်တို့ကအမြဲသင်တို့အဘို့ပိုကောင်းတဲ့ app ကိုအတှေ့အကွုံအောင်လုပ်ဆောင်နေဒါကြောင့်သင့်ရဲ့တုံ့ပြန်ချက်များအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပါတယ်။ လာမယ့်သူကသိမ်းဆည်းထားပါ!
34.06 ကို MB